Zvigadzirwa Fekitori | China Zvigadzirwa Vagadziri & Vatengesi - Chikamu 2
Kupisa kutengesa kupisa shrink tambo kugumisa Radiation co-kubatanidza kupisa-shrinkage tambo yekuwedzera. Chigadzirwa chidiki muhukuru, kurema uremu, kuita kwakavimbika, kugadziriswa kune simba, kuiswa kuri nyore uye mutengo wakaderera. Inoshandiswa zvakanyanya mukati mekunze-uye-mukati tambo tambo yepakati terminal yekubatanidza. Inoshandiswawo zvakanyanya mukuwaniswa kwesimba kwemagetsi-kuvaka uye kuvaka chikepe. Properties Yakajairika data Bvunzo nzira nzira Tensile simba (MPa) -10.4MPa ASTM D 2671 E ...
inotonhora shrinkage tambo accessories 1.Reliable kugona Iyo inogadzirwa kubva kunze-SiR (Silicone Rubber) ine inogutsa yemagetsi kuputira, yakatanhamara kuomarara yekutevera kuramba, ngura kuramba nezvimwe, pamwe nekutenderwa emagetsi kugona uye kwenguva refu-sevhisi-hupenyu. Inogona kushandisa zvine mwero radial kumanikidza pane tambo nguva dzese kugadzira yekudyidzana compact mushure mekuisa. Zvakare ichawedzera kana kudzikira pamwe chete netambo kudzivirira tip-uye-kumhanya kufambira mberi kunokonzerwa ne ...